मेषः– दिन सामान्यतया अनुकुल नै देखिन्छ । समस्याको पहिचान गरेर मात्र समाधानमा लाग्न सके उपलब्धि राम्रै हात पारिनेछ । कार्य क्षमतामा कुनै कमि आउने छैन । व्यापार व्यवसायमा प्रगति हुनेछ । गीत संगितमा अभिरुची बढ्नेछ । सहयोग सहानुभूति मिल्नेछ । सामाजिक काममा अभिरुची बढ्नेछ । इज्जत प्रतिष्ठा बढ्नेछ ।
वृषः– दिन मध्यम खालको देखिन्छ । काममा सहजीकरण अझै हुनेछैन । उपलब्धि विहिन काममा समय बढि खर्च हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट लगनशिल अनुसारको प्रतिफल मिल्ने छैन । आत्म विश्वासको कमि हुनेछ । यात्राको सम्भावना देखिन्छ । आफन्तले पराईको व्यवहार गर्ने छन् । धार्मिक काममा सहभागिता हुनेछ ।
मिथुनः– हेलचक्र्याईले उपलब्धिको संरक्षण गर्न सकिने छैन । आफन्त सँगको विश्वास र भरोसा टुट्नेछ । लगनाी अनुसारको व्यापार व्यवसायबाट उपलब्धि हासिल हुने छैन । काममा ढिला सुस्ति गर्दा अवसर फुत्किनेछ । खानपान नमिल्दा स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । लेनदेन कारोवार विग्रिन सक्छ ।
कर्कटः–लगनशिल भई काम गर्नु भएको खण्डमा उपलब्धि राम्रै हात लाग्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन बढ्नेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा नयाँ अवसरको खोजी हुनेछ । भौतिक सम्पतिमा वृद्धि हुनेछ । मनमा सुख,शान्ति मिल्नेछ । साथी भाईको सहयोग पाईनेछ । गीत,संगित तथा कला सहित्यमा अभिरुची बढ्नेछ ।
सिंहः–कार्य लगनशिलता बढाउनु पर्ने देखिन्छ । अरुको भर परेर कुनै पनि काम नगर्नुहोला । काममा विरोधीको बक्रदृष्टि पर्नेछ । पढाई लेखाईमा प्रगति कम हुनेछ । श्रृङ्गारिक तथा सौन्दर्य प्रशोधन जस्ता व्यवसायबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ । धार्मिक आस्था र विश्वास बढ्नेछ । कुरा भन्दा काममा जोड दिनुहोला । नयाँ सम्भावनाहरु देखिने छन् ।
कन्याः– समयमा अझै सुधार आउने देखिन्न । काममा अन्योलता अझै कायम रहनेछ । इज्जत प्रतिष्ठामा आच आउने काम हुनसक्छ सचेत रहनु होला । राजनीति औजार प्रयोग गरेर तपाईलाई दुःख दिन सक्छन् । व्यापार व्यवसायमा अवनति हुनेछ । देखिएका सम्भावना क्षिण भएर जानेछन् । काम गर्र्न स्वास्थ्यले पनि कम साथ दिनेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको पूर्वसभामुखहरुको बैठकमा तीन जनामा सहभागि
तुलाः– सामान्यतया दिन प्रतिकुल देखिन्छ । साना साना कुराले पिरोल्नेछ । सहज रुपमा काम हुने छैनन । अनावस्यक व्यस्तता बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट उचित लाभ लिन सकिने छैन । वैदेशिक यात्राको सम्भावना देखिन्छ । विपरित लिङ्गिबाट सहयोग मिल्नेछ । घरका समस्या समाधान गर्न गाह्रो गाह्रो हुनेछ । मनमा शान्ति मिल्ने छैन ।
वृश्चिकः– समयले साथ दिनेछ । सवैलाई विश्वासमा लिएर काम गर्दा राम्रै हुनेछ । काम गर्दा साथी भाईको सहयोग पाईनेछ । संघर्षबाट सफलताको शिखर चढ्न पाईनेछ । परिश्रमको अन्तिम परिणाम सुखद रहनेछ । कार्य क्षमतामा कुनै कमि आउने छैन । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य लाभ हुनेछ । पढाई लेखाईमा सामान्य प्रगति हुनेछ ।
धनुः– दयाँ मायाँ गर्ने कमै हुनेछन् । समस्याबाट टाढा नभागि अगाडि बढ्नु भयो भने मात्र मिशनमा पुग्न सक्नु हुनेछ । आर्थिक प्रलोभनमा परेर वाह्य व्यक्तिसँग कुनै काम नगर्नु होला । स्पष्ट वोल्दा आफैलाई नोक्सना हुने भएकोले आर्थिक करोवार र वोलिलाई नियन्त्रण गर्दा राम्रो हुनेछ । व्यापारमा उतार चढाव आउनेछ ।
मकरः– दिन सामान्यतया अनुकुल नै देखिन्छ । घर परिवारमा सुख शान्ति छाउनेछ । काम गर्ने जोश जागर बढ्नेछ । जीवन साथीको सहयोग लिएर काम गर्दा राम्रै हुनेछ । लगानीमा धेरै जोड नदिनु होला । इच्छा र आकाँक्षा केहि पुरा हुनेछन् । भोज भतेर सभा सम्मेलनमा भाग लिने अवसर मिल्न सक्छ । निमन्त्रणा आउनेछ ।
कुम्भः– समयले साथ कम दिनेछ । सहज रुपमा काम हुने छैनन् । आशा र भरोसा टुट्नेछ । व्यापार व्यवसायमा देखिएका सम्भावना क्षीण भएर जानेछन् । राजनीति व्यक्तिको भर परेर कुनै योजना अगाडि नसार्नु होला । आर्थिक कारोवारमा ध्यान दिनुहोला । जोखिम मोलेर काम गर्दा नोक्सान धेरै हुनेछ । सुरक्षित यात्रा गर्नु होला ।
यो पनि पढ्नुहोस गोंगबु हत्या भएका बोहोरा महिला भेट्न होटलबाट निस्किएका थिए शनिबार
मिनः– ग्रह,गोचर सामान्य अनुकुल देखिन्छ । अस्थिरता त्याग्नु होला । प्रयास र प्रयत्नबाट धेरै काम बन्ने छन् । अरुको भरमा मात्रै काम नगर्नु होला । अध्ययन कार्यमा भन्दा आर्थिक कार्यमा बढि दखल हुनेछ । कामको विचमा विचार परिवर्तन नगर्नु होला । लगानी भन्दा श्रममा जोड दिनुहोला । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ ।
२२,असार.२०७६,आईतवार ०६:३० मा प्रकाशित
← सेक्स गर्दा किन आवाज निकाल्छन् महिला ?
१२ विषयमा नम्बर थपेर ३ वटा डिग्री ! →